10 Imisebenzi Ngoba baseNigeria abafuna ukuhamba Round Umhlaba
Posted By: Fisayo Mashi 19, 2016
Abantu ngomuzwa Wanderlust kusheshe bazizwe likhanyelwe ukucabanga kokuchitha ukuphila kwabo umsebenzi obenza babe endaweni ethile isikhathi eside kakhulu. Ukuze laba bantu, ukuphila abajikelezayo nguye engcono.
Uma ungomunye walabo bantu abathanda ukushaya umgwaqo njalo, elele emadolobheni entsha, yokunambitha ukudla entsha kanye nokufunda ngamasiko entsha, nawe nakanjani ufuna ukwenza i-career elikuvumela ukuhlola umhlaba emigomeni akho.
About 42% ka ngezamabhizinisi ukubhuka amahhotela abo besebenzisa Smartphones kanye lokhu ukuvumele hotels.ng (Isevisi i-inthanethi hotel yokubhuka abantu abafuna ezingabizi kwegumbi eNigeria) ukucacisa imikhakha ngezamabhizinisi abahambayo kakhulu emhlabeni wonke.
Nazi phezulu 10 imisebenzi ukuthi ekuqinisekisa wena, umsebenzi wokukhiqiza babuka izwe:
1. Ezemidlalo Umqashi
Uma ufika umsebenzi nezinhlangano zezemidlalo njengoba recruiter ezemidlalo, incazelo umsebenzi wakho kuzodinga ukuthi ukuhamba kwemidlalo ezweni lonke ukuze ayohlola bese ziqasha ithalente entsha.
Ukuze ujabulele ngempela lo msebenzi, udinga ukuba abanothando ezemidlalo!
2. kaMcwaningi Mabhuku lwezezimali
Ingabe wena uthanda izinombolo? Kanjani umqondo wokuthobela omunye umuntu imali ngihlola amarekhodi ezimali semininingwane yentela amabhizinisi emhlabeni umsindo emhlabeni? Okuhle? Khona-ke kufanele nibe mabhuku!
bamabhuku emhlabeni kulindeleke ukuthi ukhule ngamaphesenti 11% ngaphambi 2024, ngoba lo msebenzi kudinga ukuba wenze ima izingxenye ezihlukahlukene zomhlaba kubhizinisi.
3. Umphathi ukwakhiwa
I pay kuhle, futhi uthola ukuhamba ngokuvamile ngenxa imisebenzi amaningi-site. Ungase uzithole kokuchitha izinyanga ezimbalwa endaweni ethize ukuze uqede umsebenzi wokwakha. Ngisho noma awukwazi ube ngumphathi zisuka ngenxa iziqu zakho, ungahlala njengo kwabasebenzi.
4. Umsebenzi Osiza Okuhambayo
Udokotela othile osebenza wonke yenkampani ekuhambeni kuya umfana uma benenkinga. Nge ulwazi lwakho olukhethekile, amasevisi izodingeka nxazonke ezweni – futhi emhlabeni wonke. Ukugcina ubuhlobo bakho namaklayenti efudumele futhi mutualistic kuzodinga okwenza waqobe.
5. Sebenza ship
Ukusebenza emkhunjini kufanele kube omunye imisebenzi iphupho phezulu abantu abathanda ukuhamba. Cabanga ngalokhu: wena ngokuyisisekelo ukubanjwa ikhokhwe ukuhamba emhlabeni ngenkathi iya ukudla nendawo yokulala indlu. Neze ngisho okubalulekile ubunjalo umsebenzi wakho kukhasi ship.
6. Umthwebuli wezithombe zomshado
Uyazi zonke lezo zithombe uya khona lomshado ku Bella Naija? Photographer kufanele kube endaweni ukuthatha labo isibhamu! Yeka cool wukuthi? With okuhle izinga ikhamera kanye neso kuhle ukukhanyisa kanye nemibala, nawe ungaba baziphilise ukuhamba nalo mbhangqwana ukuthatha izithombe amnandi ngempela.
7. Izinkundla Planner
Izimo zethu zihluke kakhulu injengemali wedding photography, kukhona isithembiso esikhulu ngawe uma ungumsebenzisi we-Planner umcimbi. Ungase unqume sigxile ezenzakalweni wendawo (amaqembu, imishado, zokuzalwa) kodwa ngempela travel juice kuyinto ekuhleleni imicimbi kazwelonke ngamazwe like imikhosi, izingqungquthela kanye imibukiso ukuhweba.
8. Indima Corporate i Umsizi Executive
Uma ungenayo inkinga, ungathatha emsebenzini wokuba umsizi esiphezulu chwepheshe esiphezulu, okusho ukuthi uzobe uhamba kwesokudla eceleni boss for yebhizinisi! Kuyinto inqubo okukhulu kwakha phindela wakho kakhulu!
9. Field Service Onjiniyela
Nguwe go-kumuntu uma nezidingo zamakhasimende ukusiza kokufaka noma silungisa umkhiqizo. Uma unjiniyela enkonzweni yasensimini ngoba inkampani ngamazwe, wena bayoqeqeshwa olunzulu futhi ukuhamba kabanzi ezindaweni ezithakazelisayo emhlabeni jikelele.
10. Umthengi nokudayisa / Umthengisi
Omkhulu ibhizinisi ukukhetha uma uthanda izinto imfashini futhi ube Wanderlust: a retailing emsebenzini kungenzeka kube lubito lwakho. Thenga izinto ezingavamile kwelinye izwe, ukuthengisa kwenye!
Akukhona lokho kuphela! Okunye imisebenzi kufanele ucabangele uma sithanda ukuhamba zihlanganisa ngokuba isisebenzi sasendizeni, aid isisebenzi ngamazwe, abasebenzi bokuthengisa, ejenti travel, futhi umbhali travel.
1 Amazwana on "10 Imisebenzi Ngoba baseNigeria abafuna ukuhamba Round Umhlaba"
Kando Andi | Mashi 24, 2016 at 2:45 pm | Phendula
lezo imisebenzi emihle kakhulu futhi luthandeke Nigerian. Njengoba i-indonesian, Nginentshisekelo kubo kodwa ngezinye izikhathi Singabantu akulula ukuthola labo imisebenzi. Well, Sengilinde ngeposi lakho elilandelayo. Siyabonga